China Fosber Corrugated Board Slitting Knives mpanamboatra sy mpamatsy |Xinhua
Tungstène Carbide Corrugated Paper Slitting Knife
Izy io dia tena clamped amin'ny corrugated taratasy fanapahana fitaovana, ary ny corrugated taratasy dia nanapaka ny fitsipiky ny slitting.
Ny simenitra carbide corrugated taratasy boribory antsy vita amin'ny tungstène carbide sy kobalta vovoka metallurgy manana hamafin'ny avo sy mitafy fanoherana, ary miaraka amin'izay koa manana hafanana tsara sy ny harafesiny fanoherana, ka ny antsy no be mpampiasa amin'ny fanapahana ny corrugated baoritra.
Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tahan'ny tungstène karbida sy kobalta ary ny haben'ny ampahany amin'ny vovobony tungstène karbida, dia mahazo karbida simenitra miaraka amin'ny fananana samihafa izahay mba hanomezana ny filan'ny mpanjifa samihafa.
Ny orinasa dia manana mihoatra ny 20 taona ny famokarana tantara ny tungstène carbide slitting antsy, manokana amin'ny famokarana tungstène carbide corrugated taratasy boribory antsy sy isan-karazany carbide slitting antsy.
Maherin'ny antsasa-manilan'ny vokatra no aondrana any Eoropa, Etazonia ary firenena sy faritra mandroso hafa.Ny fahombiazan'ny vokatra dia mahafeno tanteraka ny fepetra henjana amin'ny fitaovana slitting haingam-pandeha isan-karazany.Ny kalitaon'ny vokatra dia eo amin'ny toerana voalohany eo amin'ny tsenan'ny fitaovana indostrialy ao an-toerana sy any ivelany.
Ny tanjon'ny orinasanay dia ny ho lasa matihanina indrindra, kalitao tsara indrindra ary mpamatsy antsy vy tungstène lehibe indrindra.
kilasy Haben'ny voa hakitroky hamafin'ny TRS(N/mm²) Mety amin'ny fanapahana
ZT20U Sub-fine 14.35-14.5 91.4-91.8 3200 Corrugated board, Fibre simika, Plastic, hoditra
ZT26U Sub-fine 14-14.1 90.4-90.8 3500 Boribory miboridana, Andry batterie
ZT30U Sub-fine 13.85-14 89.7-90.2 3200 Paperboard
Item No OD (mm) ID (mm) T (mm) Lavaka (mm) Misy amin'ny Machine
1 230 110 1.1 φ9*6 lavaka FOSBER
2 230 135 1.1 4 fanalahidy FOSBER
3 220 115 1 φ9*3 lavaka AGNATI
4 240 32 1.2 φ8.5*2 lavaka BHS
5 240 115 1 φ9*3 lavaka AGNATI
8 260 112 1.5 φ11*6 lavaka ORANDA
10 260 168.3 1.2 φ10.5*8 lavaka MARQUIP
11 270 168.3 1.5 φ10.5*8 lavaka HSEIH
12 270 140 1.3 φ11*6 lavaka VATANMAKEINA
13 270 170 1.3 φ10.5*8 lavaka
14 280 160 1 φ7.5*6 lavaka MITSUBISHI
15 280 202 1.4 φ8*6 lavaka MITSUBISHI
16 291 203 1.1 φ8.5*6 lavaka FOSBER
17 300 112 1.2 φ11*6 lavaka TCY
Antsy ho an'ny fanapahana board corrugated Ho an'ny milina sinoa
Item No OD (mm) ID (mm) T (mm) lavaka
6 250 105 1.5 φ11mm * 6 lavaka
8 260 112 1.5 φ11mm * 6 lavaka
9 260 114 1.6 φ11mm * 8 lavaka
11 260 158 1.5 φ11mm * 8 lavaka
12 260 112 1.4 φ11mm * 6 lavaka
13 260 158 1.5 φ9.2mm * 3 lavaka
14 260 168.3 1.6 φ10.5mm * 8 lavaka
15 260 170 1.5 φ9mm*8 lavaka
16 265 112 1.4 φ11mm * 6 lavaka
17 265 170 1.5 φ10.5mm * 8 lavaka
18 270 168 1.5 φ10.5mm * 8 lavaka
19 270 168.3 1.5 φ10.5mm * 8 lavaka
20 270 170 1.6 φ10.5mm * 8 lavaka
21 280 168 1.6 φ12mm * 8 lavaka
22 290 112 1.5 φ12mm * 6 lavaka
23 290 168 1.5/1.6 φ12mm * 6 lavaka
24 300 112 1.5 φ11mm * 6 lavaka
FAQ momba ny olana ara-teknika
Famakafakana ny olana mahazatra amin'ny antsy slitting board corrugated
(Tsy: ny olana rehetra noresahintsika momba ny antsy mahafeno fepetra)
Q1 Nahoana no fohy ny androm-piainany ny asa currugated board slitting antsy?
A: Mety ve ny haben'ny kodiaran'ny fikosoham-bary?
Ny haben'ny kodiaran'ny fikosoham-bary loatra loatra dia mahatonga ny fotoana fiasan'ny antsy fohy
F2 Nahoana ny sisin'ny hazo fisaka notapatapahina amin'ny antsy misy burr sy levona?
A: Azafady, diniho ny sisin'ny antsyo, ampy ve ny sisiny?Sa raha lena loatra ny board corrugated ?
Q3 Tapaka ny antsy
A: Fivoriambe tsy mety (ohatra flange lovia deformed; tsy mety screwing) dia hiteraka fahatapahana haingana ny lelany, izay tsy mety mikasika ny lelany dia voarara mafy mandritra ny miasa,
Ny kodiaran'ny fikosoham-bary tsy marin-toerana dia manapaka ny antsy, azafady jereo ny fitondran'ny kodiarana fikosoham-bary.
Fikasihana na fitokonana tsy mety amin'ny zavatra sarotra hafa.
Loza fifandonan’ny antsy
Q4 Chips eo amin'ny sisiny fanapahana aorian'ny fitotoana.
A: Ny kodiaran'ny fikosoham-bary tsy marin-toerana dia mety miteraka ity olana ity, na dia manapaka ny antsy aza, Ny fitokonan'ny zavatra mafy dia mety hiteraka potika amin'ny sisiny koa.
Q5 Nahoana no tsy mahitsy ny sisin'ny board corrugated?
A: hery tsy manam-paharoa amin'ny antsy ho an'ny board corrugated amin'ny hakitroky avo.
FAQ momba ny fivarotana mialoha sy aorian'ny varotra
F: Azonao atao ihany koa ny manome vy tahony?
Eny, manana mpamatsy mpamatsy izay niara-niasa nandritra ny taona maro izahay, ary afaka manome anao stell scraper mitantana amin'ny kalitao avo lenta, ambany vidiny.
teo aloha: Antsy Carbide ho an'ny fanapahana fibre simika
Manaraka: Agnati Carbide Circular Corrugated Slitting Knives
Agnati Carbide Circular Corrugated Slitting ...